Etu ị ga - esi bawanye ohere Email gị ị ga - abanye na Igbe mbata | Martech Zone
Etu ị ga - esi bawanye ohere Email nke ịba na Igbe mbata
Na Tọzdee, Septemba 9, 2014 Na Tọzdee, Septemba 9, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ha ozi nnapụta email na n'ezie na-eme ya na igbe mbata. Ikike maka onye na-ahụ maka email iji nyefee email gị ka akọwapụtara ma tụọ dị ka nnyefe. Mana nke ahụ pụtara na enwere aka n'etiti ndị sava ahụ anabatala email gị. Nke a apụtaghị na ọ dị ugbu a na igbe mbata onye debanyere aha gị. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ka email nwere 100% deliverability na 0% igbe ọnyịnye… niile nke gị ozi ịntanetị na-aga spam nchekwa. Chọrọ a toolset dị ka Ozi Inbox n'aka ndị nkwado anyị na 250ok ịhụ otú ị na-eme na nke ahụ.
Mgbe ị zigara email maka azụmahịa gị, ị na-atụ anya na ọ ga-apụta na igbe mbata ndị debanyere aha gị, nri? Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ihe iji nweta ozi email karịa ka ị nwere ike ịtụ anya ya. Ndị na-enye Ọrụ Email (ESP), dịka VerticalResponse, mee ọtụtụ ihe iji hụ na email gị na-eme ya na igbe mbata, mana ị na-ekere òkè na nnyefe, kwa. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe ndi ozo na ihe ichoro ka i soro iji nyere ozi email gi aka ime ya na igbe ozi, karie ihe ojoo Spam.
M na na na na na ngụkọta nkwekọrịta na niile Ndụmọdụ a na infographic a. Mgbe m rụrụ ọrụ maka onye na-eweta ọrụ Email, anyị na-eme otu ihe mgbe niile; Agbanyeghị, mgbe anyị hapụsịrị ma soro ọtụtụ azụmaahịa na-agba izu, anyị hụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ndepụta dị ike nke ndị ọzọ na-eji usoro aghụghọ nke ga-ewe iwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ahụ maka ịnyefe ọrụ Email ọ bụla. Agbanyeghị, anyị hụrụ ha ọ bụghị naanị na ha rụpụtara nnukwu nsonaazụ, mgbe e gburu ha nke ọma na ntinye igbe ha na mkpesa SPAM adịghị iche karịa ụlọ ọrụ ndị anaghị eme ihe ike.
Anyị ji akwụkwọ akụkọ nke anyị gbaba n’ime ya. Ego ha zuru ezu ruo ọtụtụ ọnwa, anyị gbanwere ndị na-eweta ọrụ na-eweta ọrụ email na-ewu ewu ma ha jụrụ ndepụta anyị ozugbo site na ndepụta aha ha dị oke mma duper system usoro nke ha na-erere onye ọ bụla dị ka nke kachasị mma. Ha rịọrọ ka anyị zipụ ozi ọhụrụ ma rịọ ka ndị ọ bụla debanyere aha na ndepụta ahụ ọzọ. Ya mere… ha chọrọ ka anyị zipu nkwukọrịta ozi email ọzọ mgbe anyị nyechara ikike - ụzọ adịghị!
Anyị rụrụ ụka ruo mgbe ESP kwere ka anyị ziga na ndepụta anyị (mba - ọ bụghị VerticalResponse). Anyị zigara ndepụta… ma ọ dịghị otu mkpesa e dekọrọ. Ga-echeta na onye ọ bụla ESP nwere sava ha nke nwere nkwupụta ha ga-echedo n'ụgwọ niile. Nke ahụ pụtara na ha ga-emehie ihe efu. Na nwute, azụmaahịa anaghị arụ ọrụ oge ọ bụla.
Anaghị m atụ aro ndị ị na-enweghi mmekọrịta. Naanị na enwere ụfọdụ isi awọ nwere ike iju gị anya na ị na-arụ ọrụ nke ọma.
Tags: nnweta abụọ na-abanyeozi nnapụta emailnnyefe oziemail ugboroozi emailemail nkewadebanye aha emailigbeịpụ naspamwepu ahavetikal nzaghachivetikalnnabata email
Inye Ego Dị ọnụ ala na Audio Ga-abawanye Njikọ vidiyo
Nghọta bụ Nhọrọ, Eziokwu abụghị